24.03.2020 Coronavirus Warbixinta oo faahfaahsan: Tirada Bukaanka la Bogsiiyey 26 | RayHaber | raillynews
HomeGUUDDAQIIQADII MINUTEcoronavirus24.03.2020 Coronavirus Warbixinta oo faahfaahsan: Tirada Bukaanka la Bogsiiyey 26
miiska muujinaya xaaladda ugu dambeeyay ku saabsan xaaladaha # Coronavirus dalka Turkiga, ayaa waxaa lala wadaago dadweynaha.
Tirada kiisaska: 1.872
Daryeel Deg-deg ah: 136
Intubated (Bukaanka neefsashada): 102
turkey liiska bukaanka virus Corona
Twiti, oo sharraxay dheelitirka coronavirus ee taariikhdu ahayd 24.03.2020, Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca wuxuu ahaa sidan soo socota:
Immisa qof Tan waxaa la weydiiyaa maalin walba 195 wadan. Khasaaraha iyo haddii aan aad looga daahay Turkey. Tallaabada ayaa ka hortegi kara kororka. Isugeyn 24 tijaabooyin ah ayaa lagusoo afjaray 3.952 HOURS. Waxa jira 343 cudur oo cusub. Waxaan luminay 7 ka mid ah bukaannadeenna. Mid wuxuu ahaa COPD bukaan. Lix waxay ahaayeen da 'weyn. Waxaan u xoog badnahay sidii aan qaadnay.
Balance Sheet Turkey Coronavirus 24.03.2020/XNUMX/XNUMX
Ilaa hadda, guud ahaan 27.969 baaritaan ayaa la sameeyay, 1.872 ayaa la ogaadey, waxaanna luminay 44 bukaan, oo badankood waa waayeel iyo bukaanno COPD ah.
11.03.2020 - Wadarta 1 Kiiska
13.03.2020 - Wadarta 5 Kiiska
14.03.2020 - Wadarta 6 Kiiska
15.03.2020 - Wadarta 18 Kiiska
16.03.2020 - Wadarta 47 Kiiska
17.03.2020 - Wadarta 98 ​​Dacwadood + 1 Dhimatay
18.03.2020 - Wadarta 191 ​​Dacwadood + 2 Dhimatay
19.03.2020 - Wadarta 359 ​​Dacwadood + 4 Dhimatay
20.03.2020 - Wadarta 670 ​​Dacwadood + 9 Dhimatay
21.03.2020 - Wadarta 947 ​​Dacwadood + 21 Dhimatay
22.03.2020 - Wadarta 1256 ​​Dacwadood + 30 Dhimatay
23.03.2020 - Wadarta 1529 ​​Dacwadood + 37 Dhimatay
24.03.2020 - Wadarta 1872 ​​Dacwadood + 44 Geeri
Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca iyo Wasiirka Waxbarashada Qaranka Ziya Selçuk waxay bayaan u gudbiyeen xubnaha saxaafadda kadib shirkii guddiga cilmiga ee Coronavirus. Wasiirka Koca wuxuu siiyay macluumaad ku saabsan shaashadda halka tirada kiisaska lagu shaacin doono.
Isagoo carabka ku adkeeyay inaysan jirin xarun caafimaad ama dhakhtar kasta oo ka hortegi kara gudbinta fayraska, Koca wuxuu yidhi, “Waad ka hortagi kartaa tan. Waad ka hortagi kartaa haddii aad gurigaaga aado. Waad ka hortagi kartaa adigoo xiraya maaskaro haddii loo baahdo. Waad ka fogaan kartaa adigoo ka fogaanaya xiriirada. Gobolkeenu wuxuu ku xoogan yahay halgankaas. Annagu waxaan nahay kuwa natiijooyinka ku heli doona awooddan.
“Tirada kiisaska da 'dhexe ma ahan mid hooseeya”
Isaga oo la hadlaya dadka da'da ah, Koca wuxuu yidhi, “Tirada kiisaska da'da dhexe ma ahan kuwo hooseeya. Fayraska kuma kala saarayo da'da yar, da 'weyn iyo kan dhexe. Haddii aad qabtid cudur aadan ka warqabin, fayraska ayaa shaaca ka qaadi doona daaweyntuna way ka sii adkaan doontaa sidii aad filaneysey. ”
“Fadlan ha u arkin dalabka sidii fasax ahaan”
Isagoo xusuusinaya in waxbarashada carruurtu ay sii socoto, Wasiirka Fahrettin Koca ayaa tiri:
“Tababarka waxaa lagu bixiyaa internetka iyo telefishanka in muddo ah. Fadlan ha u tixgelin arjiga sidii fasax ahaan, ka ilaali carruurtaada inay fahmaan mawduuca sidan oo kale ah. Waa inaan looga tagin casharadooda iyo asxaabtooda.
Macluumaadka waxaa loo cusboonaysiin doonaa si dijital ah waxaana lala wadaagi doonaa dadweynaha maalin kasta.
Wasiir Koca wuxuu la wadaagay macluumaadka soosocda ee ku saabsan dalabka in loo sameeyo dadwaynuhu si ay u helaan macluumaad sahlan oo cad cad mudada soo socota:
Waqtiga soo socda, waxaan si joogto ah u cusbooneysiin doonaa tirada bukaannada, tirada baaritaannada, tirada kiisaska aan luminay, tirada bukaannada ku jira xannaanada degdegga ah, tirada bukaannada ku xiran intubation, aaladda neef-mareenka, iyo tirada bukaannada bogsashada, maalin walbana waa nala wadaagi doonaa dadweynaha.
Dawooyinka Shiinaha laga keenay
Isagoo tixraacaya tirada dawooyinka Shiinaha laga keenay iyo sida loo isticmaalo bukaannada, ayuu Koca yidhi, “136 bukaan ayaa la bilaabay. Qiyaasta daaweynta ayaa la hubaa. Waxaan ogsoonahay in qiyaasta iyo sanduuq celcelis leh oo talo bixin ah laga soo saaray Guddiga Sayniska loo adeegsado bukaanka, iyo ugu yaraan 5 maalmood oo adeegsi ah. Waxaan awoodi doonnaa inaan si waadax ah ugala hadalno isbuuca soo socda bal inay faa'iido leedahay iyo in kale.
"83 milyan ma aha inay imtixaanka galaan"
Koca wuxuu kaloo sharraxaad ka bixiyay cidda samaynaysa imtixaannada wuxuuna yidhi, “83 milyan oo dad ahi uma baahna inay yeeshaan imtixaan, adduunkana kama jiro dalabkaas. Sababta oo ah marka aad imtixaanka sameyso, waxay noqon kartaa wax aan fiicneyn, laakiin waxaa laga yaabaa inay fiicantahay 3 maalmood iyo 5 maalmood kadib. Waad ku qaadi kartaa dad badan waqtigaas. Qof walba waa inuu u dhaqmaa sidii side sideer fayraska, "ayuu yidhi.
Waxyaabaha laga soo qaaday hadalada Wasiir Selçuk waa sida soo socota:
Wasiirka Ziya Selçuk ayaa sheegtay in soojeedinta Guddiga Sayniska, ay go'aansadeen in iskuulada la dhigo fasax illaa 30ka Abriil iyo in masaafada barata ay tahay in la sii wado iyada oo la eegayo tallaabooyinka coronavirus.
Isagoo ogaynaya in howshu ay ahayd mushkilad la kulantay markii ugu horeysay taariikhda adduunka, Selçuk wuxuu carrabka ku adkeeyay inay u qaddarin doonaan arrintan mid Wasaarad ahaan si mutadawacnimo ah muhiimaduna ay u tahay caafimaadka carruurta.
"Waxaan diyaar u nahay dhammaan noocyada xaalado ee ku saabsan magdhowga baahiyaha waxbarasho iyo imtixaanno"
Isagoo ku nuuxnuuxsaday inay sii wadi doonaan waxbarashadooda iyaga oo leh tayo aad iyo aad u sareysa iyo barnaamijyo buuxa oo bilaabaya wiigga dambe, Selçuk wuxuu yidhi:
Waxaan rabaa dhamaan muwaadiniinteena iyo waalidkena inay noqdaan kuwa faraxsan. Waxaan diyaar u nahay dhammaan noocyada muuqaallo ee la xiriira dhammaystirka iyo magdhowga baahiyaha waxbarasho ee ubadkaaga iyo imtixaannada. Qofna yuusan ka walwalayn inaan sameyn doono wixii lagama maarmaan ah.
Wasiirka Selçuk wuxuu cadeeyay in waqti ka waqti, uu shacabka ogeysiin doono isla markaana uu la wadaagi doono qaar ka mid ah qodobada ku saabsan sharciga kale, baahiyaha iyo imtixaanaadka la xiriira Wasaaradda Waxbarashada Qaranka.
Xaaladda ugu dambaysa ee mashruuca Trabzon Light Rail System, halkan waa wadada faahfaahsan
Isbitaalka ayaa ku xanuunsaday jidka
Dib u soo kabashada Bukaanka aan Barafka lahayn
Qalabka hawo qabta ee shaqeynaya sida caadiga ah ee baqaaradaha ku yaal magaalada BursaRay waxay samaystaan ​​dadka rakaabka ah xanuunsanaya
Darawalka metrobus ayaa ka tagay rakaabkii bukaanka wadada